“အိမ်အကူကလေးမလေးအတွက်ရော ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်ပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး Child Psychoမဝင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးမိတယ်ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက်” - Cele Connections
“အိမ်အကူကလေးမလေးအတွက်ရော ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်ပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး Child Psychoမဝင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးမိတယ်ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက်”
ဘော်ဒီကောက်ကြောင်း အမိုက်စားနဲ့ လှပတဲ့ ဆက်စီမော်ဒယ် ဇာဇာထက်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ ဆက်စီမော်ဒယ် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေရတာ သူမရဲ့ ဝမ်းရေးအတွက် ခက်ခဲလို့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခဲ့ကာ ကြုံတွေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့မှာ ဇာဇာထက်က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးအတွက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုကာ တတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူငွေလေးတွေကို ဆေးရုံထိ သွားရောက်ကာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..။
ဇာဇာထက်က ခက်ခဲနေပြီး မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့သွားရောက် လှူဒါန်းတာဖြစ်ပြီး ဒီကလေးလေးရဲ့ အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမခံစားရတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို “အမှုစစ်တဲ့အချိန် တရားရုံးကမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကလေးမလေး အမြန် နေကောင်းကျန်းမာစွာ အစစ်ခံနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်…။ အမှန်တရားလည်း အမြန် ပေါ်ပေါက်ပါစေ.။ ဖြစ်လေရာဘဝမှာလည်း ဒီလိုဝဋ်ကြွေးတွေ ကျေပါစေလို့အမ ဆုတောင်းပါတယ်..။ ကလေးဘယ်လောက် စိတ်ပင်ပန်းနာကျင်ပြီး စိတ်ဒဏ်ရာတွေရနေမလဲ ဆိုတာလည်း အမနားလည်ခံစားလို့ရနေပါတယ် ..။ ပညာတတ်ပြီး အသိဉာဏ်မဲ့ တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကြောင့် ဒီဖက်ကကလေးနှစ်ယောက်လည်း Child Psycho မရပါစေနဲ့အမဆုတောင်း ပေးပါတယ်..။ ကလေးတို့ရေ.. နောက်ပြီး တိတ်ဆိတ်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ တဲ့ သိုင်းလောကကလူတွေရဲ့ မသိကျိုးကျွံမှုတွေကိုလည်း အံ့ဩမိတယ် .။
မပြောရဲကြလို့လား … မျက်နှာနာမှာစိုးရိမ်ကြလို့လား? ကျွန်မတို့လို sexy model တွေကျ နှောင်းပိုင်းတုန်းက ယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီး အမျိုးဘာသာသာနာဖျက်ဆီးတယ် ဆိုပြီးတိုင်ကြ တောကျလူရာမသွင်းကြနဲ့ ဒီလို caseတွေကျ ဘာလို့ပြင်း”ထန်”မတိုင်တော မထောက်ပြကြတာလဲဟင်?ကျွန်မပဲ ဉာဏ်ရည် လိုက်မမှီတော့လားမသိဘူး” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ဇာဇာထက်ကတော့ မတူညီနိုင်တဲ့ အမြင်နဲ့ သူမရဲ့ ထင်မြင်ခံစားချက်လေးတွေကို ရေးတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ဇာဇာထက်နဲ့အတူတူ ထင်မြင်မိရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်..။
Source:Zar Htet’s Facebook
“အိမျအကူကလေးမလေးအတှကျရော ကနျြခဲ့တဲ့ကလေးနှဈယောကျအတှကျပါ စိတျမကောငျးဖွဈရပွီး Child Psychoမဝငျဖို့ ဆုတောငျးပေးမိတယျဆိုတဲ့ ဇာဇာထကျ”
ဘျောဒီကောကျကွောငျး အမိုကျစားနဲ့ လှပတဲ့ ဆကျစီမျောဒယျ ဇာဇာထကျကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ ဆကျစီမျောဒယျ အလုပျကို လုပျကိုငျနရေတာ သူမရဲ့ ဝမျးရေးအတှကျ ခကျခဲလို့ ဒီအလုပျကို လုပျခဲ့တာလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောခဲ့ကာ ကွုံတှရေတဲ့ အခကျအခဲတှကေို ကြျောဖွတျနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ..။ ဧပွီလ (၉)ရကျနမှေ့ာ ဇာဇာထကျက အှနျလိုငျးပျေါမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ အိမျဖျောမလေးအတှကျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့စုကာ တတျနိုငျသလောကျလေး အလှူငှလေေးတှကေို ဆေးရုံထိ သှားရောကျကာ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ..။
ဇာဇာထကျက ခကျခဲနပွေီး မိနျးမခငျြး ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့သှားရောကျ လှူဒါနျးတာဖွဈပွီး ဒီကလေးလေးရဲ့ အမှုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး သူမခံစားရတဲ့ ခံစားခကျြလေးတှကေို “အမှုစဈတဲ့အခြိနျ တရားရုံးကမေးတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ကလေးမလေး အမွနျ နကေောငျးကနျြးမာစှာ အစဈခံနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတယျ…။ အမှနျတရားလညျး အမွနျ ပျေါပေါကျပါစေ.။ ဖွဈလရောဘဝမှာလညျး ဒီလိုဝဋျကွှေးတှေ ကပြေါစလေို့အမ ဆုတောငျးပါတယျ..။ ကလေးဘယျလောကျ စိတျပငျပနျးနာကငျြပွီး စိတျဒဏျရာတှရေနမေလဲ ဆိုတာလညျး အမနားလညျခံစားလို့ရနပေါတယျ ..။ ပညာတတျပွီး အသိဉာဏျမဲ့ တဲ့မိဘနှဈပါးရဲ့ ဆငျခွငျတုံတရားကွောငျ့ ဒီဖကျကကလေးနှဈယောကျလညျး Child Psycho မရပါစနေဲ့အမဆုတောငျး ပေးပါတယျ..။ ကလေးတို့ရေ.. နောကျပွီး တိတျဆိတျပွီး မသိခငျြယောငျဆောငျနေ တဲ့ သိုငျးလောကကလူတှရေဲ့ မသိကြိုးကြှံမှုတှကေိုလညျး အံ့ဩမိတယျ .။
မပွောရဲကွလို့လား … မကျြနှာနာမှာစိုးရိမျကွလို့လား? ကြှနျမတို့လို sexy model တှကြေ နှောငျးပိုငျးတုနျးက ယဉျကြေးမှုဖကျြဆီး အမြိုးဘာသာသာနာဖကျြဆီးတယျ ဆိုပွီးတိုငျကွ တောကလြူရာမသှငျးကွနဲ့ ဒီလို caseတှကြေ ဘာလို့ပွငျး”ထနျ”မတိုငျတော မထောကျပွကွတာလဲဟငျ?ကြှနျမပဲ ဉာဏျရညျ လိုကျမမှီတော့လားမသိဘူး” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ဇာဇာထကျကတော့ မတူညီနိုငျတဲ့ အမွငျနဲ့ သူမရဲ့ ထငျမွငျခံစားခကျြလေးတှကေို ရေးတငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ဇာဇာထကျနဲ့အတူတူ ထငျမွငျမိရငျ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနျော..။
အိမ်မှာနေရင်း မိတ်ကပ်မလိမ်းထားတဲ့ သဘာဝမျက်နှာလေးနဲ့တောင် အရမ်းလှနေတဲ့ အိချောပို
“သူမနဲ့ မိသားရဲ့ သိက္ခာကို ထိပါးစော်ကားနှောင့်ယှက်နေတဲ့ သူကို မေတ္တာတရားရှေ့ထားကာ ပညာသားပါပါလေး ပြောလိုက်တဲ့ ခင်ပိုးပန်းချီ”
ဘုန်းမင်းနေလ၊ အုပ်စိုးခန့်တို့နဲ့အပြိုင် TiK Tok ရိုက်ပြီး ကလေးဆိုဒ်ဖမ်းနေတဲ့ ခင်လှိုင်နဲ့ K ညီ